ကွန်ပျူတာနဲ့ ဘင်ဂျို တီးချင်သူများ (သို့) တီးထားပြီးသားဖိုင်ကို တည်းဖြတ်ချင်သူများအတွက်ပါ
Posted by ညီနေမင်း on 9:12 AM with3comments
တစ်ခါတည်းပဲ ဆိုက်တစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် . အခုလဲ အဲ့ဒီ့ဆိုက်နဲ့တင်ပေးမှာပါ . သူကဆိုက်တစ်ခုတည်းကို upload တင်ရုံနဲ့ ကျန်တဲ့ဆိုက် 8 ခုမှာပါ ဖိုင်တင်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ် . တင်ပေးတဲ့သူလဲ မပင်ပန်းတော့ဘူးပေါ့ .. ဆိုက်နာမည်က http://www.multiupload.com/ .ပါ . ပြီးတော့ မြန်မာပြည်နဲ့ အဆင်ပြေတဲ့ ifile ကြီးလဲ အခြေအနေပြန်ကောင်းလာပြန်ပြီဗျ ..
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဂစ်တာတို့ ဘင်ဂျိုတို့ကို ၀ါသနာမပါပါဘူး . ဂစ်တာတောင်မှ ကော့ကို 10 ခုပြည့်အောင်မတီးတတ်ဘူး . အခုက ၀ါသနာပါတဲ့သူများအတွက် တင်ပေးလိုက်တာပါ .
အောက်မှာ တင်ပေးထားပါတယ် . အဆင်ပြေတဲ့နေရာကနေ Downlaod လုပ်ကြပါ .
myozinOctober 22, 2010 at 4:41 PMအကိုရေ ကျွန်တော် computer နဲ့ organ တီးချင်တယ်။ software လေးရှိရင်တင်ပေးပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ReplyDeletekoNovember 22, 2010 at 9:32 AMအကိုရေကျွန်တော်က Internet Download Manager 5.18 သုံးပါတယ်။အဲဒါ ziddu.com ကနေ download ဆွဲတဲ့အခါ resume capacity မှာ no လို့ပြပါတယ်။Speed ကလည်းအများဆုံး 10kbps ပဲတတ်ပြီး 60 % ကျော်တာနဲ့ error ပြသွားပါတယ်။ အဲဒါ resume capacity မှာ Yes ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသိချင်လို့ပါ ။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲ ziddu.com ကနေ ဘယ်လို downloader သုံးပြီးဆွဲရင်အဆင်ပြေမလဲ ဆိုတာသိချင်ပါတယ်။ ကူညီကြပါဦးခင်ဗျာ။ReplyDeletenyan myint TheinJuly 17, 2013 at 11:29 AMအစ်ကို ညီ ကျတော် ကွန်ပြူတာနဲ့ Studio ဖန်တီးချင်တယ် အဲဒါ ကူညီပေးပါအုံး အသုံးဝင်မယ့်software လေး ဖန်တီးပေးပါအုံး လို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ReplyDeleteAdd commentLoad more...
Winrar 3.9 with Cracked
ဒီ error ပေါ်နေတာ ဘာ့ကြောင့်လဲ
ဆိုက်ကို ဘယ်လို link ပြန်ညွှန်းခိုင်းမလဲ
Local Disk C/D/E အစရှိတဲ့ HDD တွေကို Double Click ...
Autocad 2002 and 2005
Blog ကို Back up လုပ်ကြစို့
Win Rar နှင့် File တွေဘယ်လို ခွဲထုတ်မလဲ .
iphone unlock လုပ်ကြမယ် ..
ကွန်ပျူတာနဲ့ ဘင်ဂျို တီးချင်သူများ (သို့) တီးထားပြ...
window ကို Geniue ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
Outloook Express နဲ့ မေးလ်စစ်ရအောင်
mg soe: ဒေါင်းလို့ရတယ် ဖိုင်ဖြေတော့ 0k.b ဘဲပြနေတယ်...
Jump Bottom to up arrow ဘယ်လိုထည့်မလဲ
Ubuntu အကြောင်း (မြန်မာလို)
bagannet ip ချိတ်ဆက်နည်း စာအုပ်ပါ
CSS အကြောင်း (မြန်မာလို)
C++ programming vol:3 (မြန်မာလို)
C++ programming စာအုပ် vol (2)
C++ programming vol:1
Microsoft Word 2002 (မြန်မာလို)
Adobe pagemaker 7.0 (မြန်မာလို)